အလှမယ်အဖြစ် ရပ်တည်မယ် ဆိုတဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူ ရဲ့ စကား ကို ဒဲ့ဝေဖန် ဖြေရှင်း လိုက်တဲ့ အလှမယ် “အမရာငြိမ်း” – Let Pan Daily
အလှမယ်အဖြစ် ရပ်တည်မယ် ဆိုတဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူ ရဲ့ စကား ကို ဒဲ့ဝေဖန် ဖြေရှင်း လိုက်တဲ့ အလှမယ် “အမရာငြိမ်း”
အ လှမယ် အမရာငြိမ်း ကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရဲ့ Miss Myanmar International ဆုကို ရရှိ ခဲ့ပြီး အလှမယ်ဆိုင်ရာ ပြိုင်ပွဲများ ကိုလည်း ဝင်ပြိုင်ခဲ့ကာ ဆုများစွာကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျ သွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေ နဲ့ ဝေးကွာခဲ့ပေမဲ့ အရင်လို လှပနေဆဲ အလှမယ် တစ်ဦးပါနော်။Tik Tok ကစားရင်း နာမည်ကြီး လူကြိုက်များလာတဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူကတော့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူဟာ အလှမယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်သွားမယ်လို့ ဖြေဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အလှမယ် တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ စကားအပေါ် အမရာငြိမ်းက အခုလိုပဲ ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
” “အလှမယ်” ဆိုတဲ့ ကိုယ်အင်မတန် တန်ဖိုးထား ရသော၊ ဂုဏ်ယူမြတ်နိုးမဆုံးဖြစ် ခဲ့ရသောအရာဟာ ဒီလောက်ထိ တန်ဖိုးလျော့ကျသွားတာလား? တခါမှ Facebook Cele၊ Tiktok Cele တွေ ကို မဝေဖန်ခဲ့ မတိုက်ခိုက် ခဲ့ဘူးပါ….မနာလိုဖို့လည်း အဝေးကြီးပါ….ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်တန်ဖိုးထား ရသောအရာကို ထိခိုက် လာလို့ ရင်ထဲတော်တော် မကောင်းလို့ ပြောမိတာပါ “အလှမယ်” ဆိုတာ ဘယ်လို လူမျိုးတွေကိုသတ်မှတ်သလဲ? အလှတစ်ခု ထဲလား? လူအများကြား မှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတတ်တာ တစ်ခု ထဲလား? ဉာဏ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတာ တစ်ခုထဲလား? စိတ်ထားမြင့်မြတ် ရင့်ကျက်တာတစ်ခုထဲလား? ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး personality ထူးခြားတာတစ်ခုထဲလား?
Spoke person ဖြစ်လာဖို့ တိုင်းရေးပြည်ရာမှာ နှံ့စပ်တာတစ်ခုထဲလား? သူနေထိုင်ရာ ဘဝမှာ အစွန်းထင်း မရှိအောင် စောင့်စည်းနေထိုင်တာ တစ်ခုထဲလား? မဟုတ်ဘူး….အဲ့ဒါတွေ အကုန်ပေါင်းမှ “အလှမယ်” ဆိုတာ ဖြစ်လာတာ ပါနော် တွေ့ရာလူကို နာမည်ကြီးနေတာ တစ်ခုထဲနဲ့၊ စိတ်ထားလေး ရိုးသားလို့ပါဆိုတာ တစ်ခုထဲနဲ့၊ ဒေါက်ဖိနပ်ကောင်းကောင်း စီးတတ်လာတာ တစ်ခုထဲ နဲ့တော့ “အလှမယ်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို လွယ်လွယ်လေး ဆွဲမထည့်ကြပါနဲ့ရှင် မေတ္တာရပ်ခံပါ တယ် ” ဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုရေး သားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ Tik Tok Cele ငြိမ်းမြတ်သူက အလှမယ် တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်သွားမယ် ဆိုတဲ့အပေါ် ပရိတ်သတ်ကြီး ရဲ့ အမြင်လေးတွေကိုလည်း ဝေမျှပေးခဲ့ ပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
အလှမယျအဖွဈ ရပျတညျမယျ ဆိုတဲ့ ငွိမျးမွတျသူ ရဲ့ စကား ကို ဒဲ့ဝဖေနျ ဖွရှေငျး လိုကျတဲ့ အလှမယျ “အမရာငွိမျး”
အ လှမယျ အမရာငွိမျး ကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ရဲ့ Miss Myanmar International ဆုကို ရရှိ ခဲ့ပွီး အလှမယျဆိုငျရာ ပွိုငျပှဲမြား ကိုလညျး ဝငျပွိုငျခဲ့ကာ ဆုမြားစှာကိုလညျး ရရှိပိုငျဆိုငျထားသူ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျကြ သှားပွီး နောကျပိုငျးမှာလညျး အနုပညာအလုပျတှေ နဲ့ ဝေးကှာခဲ့ပမေဲ့ အရငျလို လှပနဆေဲ အလှမယျ တဈဦးပါနျော။Tik Tok ကစားရငျး နာမညျကွီး လူကွိုကျမြားလာတဲ့ ငွိမျးမွတျသူကတော့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ သူဟာ အလှမယျတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျသှားမယျလို့ ဖွဆေိုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခုလို အလှမယျ တဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျမယျဆိုတဲ့ စကားအပျေါ အမရာငွိမျးက အခုလိုပဲ ဝဖေနျထောကျပွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
” “အလှမယျ” ဆိုတဲ့ ကိုယျအငျမတနျ တနျဖိုးထား ရသော၊ ဂုဏျယူမွတျနိုးမဆုံးဖွဈ ခဲ့ရသောအရာဟာ ဒီလောကျထိ တနျဖိုးလြော့ကသြှားတာလား? တခါမှ Facebook Cele၊ Tiktok Cele တှေ ကို မဝဖေနျခဲ့ မတိုကျခိုကျ ခဲ့ဘူးပါ….မနာလိုဖို့လညျး အဝေးကွီးပါ….ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါတော့ ကိုယျတနျဖိုးထား ရသောအရာကို ထိခိုကျ လာလို့ ရငျထဲတျောတျော မကောငျးလို့ ပွောမိတာပါ “အလှမယျ” ဆိုတာ ဘယျလို လူမြိုးတှကေိုသတျမှတျသလဲ? အလှတဈခု ထဲလား? လူအမြားကွား မှာ ပျေါလှငျထငျရှားနတေတျတာ တဈခု ထဲလား? ဉာဏျပညာနဲ့ ပွညျ့စုံတာ တဈခုထဲလား? စိတျထားမွငျ့မွတျ ရငျ့ကကျြတာတဈခုထဲလား? ပေါငျးသငျး ဆကျဆံရေးကောငျးပွီး personality ထူးခွားတာတဈခုထဲလား?
Spoke person ဖွဈလာဖို့ တိုငျးရေးပွညျရာမှာ နှံ့စပျတာတဈခုထဲလား? သူနထေိုငျရာ ဘဝမှာ အစှနျးထငျး မရှိအောငျ စောငျ့စညျးနထေိုငျတာ တဈခုထဲလား? မဟုတျဘူး….အဲ့ဒါတှေ အကုနျပေါငျးမှ “အလှမယျ” ဆိုတာ ဖွဈလာတာ ပါနျော တှရေ့ာလူကို နာမညျကွီးနတော တဈခုထဲနဲ့၊ စိတျထားလေး ရိုးသားလို့ပါဆိုတာ တဈခုထဲနဲ့၊ ဒေါကျဖိနပျကောငျးကောငျး စီးတတျလာတာ တဈခုထဲ နဲ့တော့ “အလှမယျ” ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျကို လှယျလှယျလေး ဆှဲမထညျ့ကွပါနဲ့ရှငျ မတ်ေတာရပျခံပါ တယျ ” ဆိုပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုရေး သားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိတျသတျကွီးရေ Tik Tok Cele ငွိမျးမွတျသူက အလှမယျ တဈယောကျ အဖွဈ ရပျတညျသှားမယျ ဆိုတဲ့အပျေါ ပရိတျသတျကွီး ရဲ့ အမွငျလေးတှကေိုလညျး ဝမြှေပေးခဲ့ ပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျရှငျ။
အောငျလက သူ့အတှကျ အရမျးလှယျ ကူတယျလို့ လှောငျပွောငျပွောဆို လိုကျတဲ့ ရိုငျနီယာ (ရုပျသံ)
ပရိသတ် များကို LIVE လွှင့်ရင်း မတော်တဆ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်းပေါ်သွားတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် ရဲ့ (ဗီဒီယိုရုပ်/သံ)
မွနျမာ့အရေးကို ကမ်ဘာက သိစဖေို့အတှကျ ခွထေောကျမှာ ဒဏျရာတှဖွေဈတဲ့ အထိ အပွေးသှားပွီးပွောပေးခဲ့တဲ့ ဟနျနာယူရီ